ကပ်ပါဒိုရှာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကပ်ပါဒိုရှာ သည် တူရကီနိုင်ငံ အနာတိုလီယာ အလယ်ပိုင်း အများအားဖြင့် နက်ဗ်ရှီယာပြည်နယ်၊ ကေဆာရီပြည်နယ်၊ ကာရှေးပြည်နယ်၊ အာဆာရာပြည်နယ်၊ မာလာတျာပြည်နယ်၊ ဆီဗာ့စ်ပြည်နယ် နှင့် နစ်ဒါပြည်နယ်တို့တွင် တည်ရှိသည်။
ဂိုရယ်မဲ အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့် ကပ်ပါဒိုရှာ ကျောက်ထွင်းဒေသ*
တည်ရှိသည့် နိုင်ငံ တူရကီ
အမျိုးအစား သဘာဝ ၊ ယဉ်ကျေးမှု
ရွေးချယ်သည့်စံနှုန်း i, iii, v, vii
စတင်သတ်မှတ်ခြင်း ၁၉၈၅ (နဝမအကြိမ်)
ဘီစီ ၃၀၀ ခုနှစ်များ နှောင်းပိုင်းမှ အစပြု၍ ကပ်ပါဒိုရှာ ဆိုသော အမည်ကို အတွင်းပိုင်းပြည်နယ် ဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် မဟာကပ်ပါဒိုရှာ ဟု ခေါ်သော ကပ်ပါဒိုရှာ အထက်ပိုင်းကို သီးသန့် ရည်ညွှန်းလေ့ ရှိသည်။ ကပ်ပါဒိုရှာ အောက်ပိုင်းမှာ အခြားနေရာတစ်ခုကို ညွှန်းဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
ဟီရော့ဒိုးတပ် ၏ အဆိုအရ  အိုင်ယွန်နီယန် ပုန်ကန်မှု အချိန် (ဘီစီ ၄၉၉) တွင် ကပ်ပါဒိုရှာသားတို့သည် တောရပ်စ်တောင်ကုန်းမှ ယူဆိုင်း (ပင်လယ်နက်) အထိ ဒေသများကို သိမ်းပိုက်ထားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကပ်ပါဒိုရှာသည် တောင်ဘက်တွင် စီလီစီယာမှ ခွဲခြားထားသော တောရပ်စ်တောင်ကုန်းများမှ လည်းကောင်း၊ အရှေ့ဘက်တွင် ယူဖရေးတီး အထက်ပိုင်းမှ လည်းကောင်း၊ မြောက်ဘက်တွင် ပွန်တပ်စ် ဒေသမှလည်းကောင်း၊ အနောက်ဘက်တွင် လစ်ကေးနီးယား နှင့် ဂလေးရှား အရှေ့ပိုင်းတို့မှ လည်းကောင်း နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ထားသည်။
သမိုင်းတလျှောက်တွင် ခရစ်ယာန်တို့မှ အသုံးပြုခဲ့သော ထိုအမည်ကို နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အသိုင်းအဝိုင်းမှ ဆက်လက် အသုံးပြုကြပြီး သဘာဝအလျောက် ရင်သပ်ရှုမော အံ့ဩဖွယ်များ ရှိပြီး အဓိကအားဖြင့် ဒဏ္ဍာရီဆန်သော မီးခိုးခေါင်းတိုင်သဏ္ဌန် ကျောက်တုံးများ နှင့် ထူးခြားသော သမိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အမွေအနှစ်များ ပါဝင်သည်။
↑ [Herodotus, The Histories, Book 5, Chapter 49]
↑ Van Dam, R. Kingdom of Snow: Roman rule and Greek culture in Cappadocia. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002, p.13. 
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကပ်ပါဒိုရှာ&oldid=551143" မှ ရယူရန်
၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၈:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၈:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။